निकै धनी हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन राशि ? – दैनिक नेपाल न्युज
काठमाडौँ । धनी बन्ने चाहना कसको हुँदैन र ? भनिन्छ, धन भनेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र खुल्छन्। मनग्य धन आर्जन गरेर सुखमय जीवन जीउने मन सबैको हुन्छ। त्यसो त कति धन कमाउने भन्ने कुरा कर्मको फल पनि हो ब्यक्तिले धन कमाउनका लागि के काम गर्छ त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हो।
कसले कति कमाउँछ र कमाएको सम्पत्तिलाई कसरी परिचालन गर्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। यद्यपी कतिपय अवस्थामा मेहनत गरेर मात्रै पनि पुग्दैन । ग्रह गोचर राशि लग्नले पनि प्रभाब पारेको हुन्छ। हेर्नुहोस् कुन कुन हुन् ति भाग्यमानी राशि
प्रेमी डाक्टर उदिप श्रेष्ठसँग लगनगाँठो कसेपछि पल शाहले आँचललाई साथीबाट किन हटाए !